Izinsiza Zokuvimba Ubumba Okuzenzakalelayo, Umshini Wokuvimba Ubumba Ozenzakalelayo - I-Bricmaker
Imigqa yokukhiqiza engaphezu kuka-2000 yasungulwa yiBricMaker kuze kube manje kokubili ekhaya nakwamanye amazwe, iBricMaker iqinisekisa amaphrojekthi wamakhasimende ngezomnotho, ukuvikelwa kwemvelo, ukonga ugesi, ezishintshayo, nokuhlanza ukubonisa, ukusiza amabhizinisi amakhasimende ethu athole izinzuzo ezinkulu kwezomnotho futhi aqaphele inani lempilo!
AKE UBE NGUCHWEPHESHE UMAKHI WAMABHINIKI
Ukuze ube yingcweti yokwakha izitini, kufanele ucabangele ngokugcwele lezi zinto ezilandelayo ezi-4 zokusetha isitshalo sezitini esisha nesimanje: Ukuhlaziywa Kwezinto Ezenziwe Ngezinto Ezingavuthiwe, Ukwakhiwa Kwezobunjiniyela, Ukukhethwa Kwezinto Zokusebenza, Ukuphathwa Kokujwayelekile. Siyi-BricMaker singathanda ukuhlanganyela nawe umkhakha wethu wezitini weminyaka engama-20 futhi sikunikeze izixhobo zekhwalithi ephezulu nekhambi lobuchwepheshe, ukukusiza ekutholeni izinzuzo ezinkulu kwezomnotho futhi ubone inani lakho lempilo!
Isivinini Esiphezulu seRoller Crusher
Ukuqoqwa Kabili Nokufakwa Kwamarobhothi
YASKAWA Robot Isitaki Stacking
Siyakwamukela Ku BricMaker
Ukwenza okokusebenza kwezitini, okunikeza ukubonisana kokuqamba kwesitshalo sezitini, ukuklanywa kwembasa nokwakhiwa nesisombululo sokukhiqiza esizenzakalelayo.
I-BricMaker isebenza kahle ekukhiqizeni izinto zokwakha izitini zobumba (sintered), i-R & D, ikililo nesisombululo sezitshalo zezitini ezizenzakalelayo. IBricMaker ihlanganisa amahektare angaphezu kwama-10, inendawo yokusebenzela yesimanje engaphezu kuka-30,000 yamamitha-skwele, ngokutshalwa kwemali okuphelele kwezigidi ezingama-30 zamaDola aseMelika, kanye nabasebenzi abacishe babe ngama-200 okubandakanya ochwepheshe nabonjiniyela abangama-90. Eminyakeni eyi-10 yakamuva, iBricMaker yenze utshalomali olukhulu lwezinto zokwakha izitini i-R & D, yamukela ubuchwepheshe bokukhiqiza obusezingeni eliphakeme kanye nemishini yamathuluzi, inikeze isixazululo esiphelele sesitshalo sezitini ngezinto zokuhluza ezingahluziwe, ukuklanywa kobunjiniyela bokukhiqiza, ukwakhiwa komkhumbi wokwakhiwa, ukufakwa kwemishini nokuthunyelwa, ukuqeqeshwa kwezobuchwepheshe kwezobuchwepheshe njll. Ukunikela ngokusekelwa okunamandla kobuchwepheshe kwamabhizinisi wezitini amaningi ekhaya nakwamanye amazwe.
Ukutshalwa kwemali okuphelele
USD 30 million +
Abasebenzi be-R & D
iqembu 90 +
unikele ngo-2000 +
I-BricMaker yokukhiqiza izinsimbi zezitini, enikezela ngokubonisana nokwakhiwa kwesitini kanye nesisombululo sokukhiqiza esizenzakalelayo.
Ama-Raw material Iyahlaziya
Uyini umkhiqizo wakho wokugcina ohlosiwe nomqondo? Lithini ibanga lakho lokugcina lomkhiqizo emakethe? Ungathanda ukukhiqiza isitini / ibhulokhi esezingeni eliphakathi noma eliphakeme emakethe yakho? Ukuqinisekisa ukuthola imikhiqizo esezingeni eliphakeme yezitini noma ibhlokhi, kufanele ucabangele ngokungathi sína izinto zokusetshenziswa zokucwenga nokuguga, amandla ezitini / amabhulokhi aluhlaza, ikhwalithi namandla omkhiqizo ophelile.
Ngokuthuthukiswa kwemakethe, kulezi zinsuku imikhiqizo yokuthengisa enomncintiswano oshisayo. Kufanele ucabangele ngokugcwele ukutshalwa kwezitshalo zezitini ngomthamo ophakeme, wandise isilinganiso sakho somnotho, ngaleyo ndlela ubambe izinzuzo zakho zomncintiswano wokumaketha futhi ugcine intuthuko enhle.
Thina Bricmaker sicabange ukuthi ukukhiqizwa kwezindleko zokuphatha kuyiphuzu eliyinhloko kunoma iyiphi imboni yezitini. Isibonelo, izindleko zezinto zokusetshenziswa, izindleko zamanzi namandla, imali ekhokhelwa ngesandla, ukugcina izindleko zemishini, izingxenye ezisele nezesekeli zemishini, uma wenza ukuphatha okuhle kwalezo zingxenye zezinto zokukhiqiza futhi ukwenze kube ukuqinisa okuthe xaxa, kanye nokumaketha okuhle imikhiqizo eqediwe, sikholelwa ukuthi isitshalo sakho sizophumelela futhi sihlale sisebenza kahle.
Thina Bricmaker sikunikeza insiza ehlelekile kusuka ekubonisaneni kwasekuqaleni kwezitshalo zezitini, ukwenza izitini zonke izinto zokusetshenziswa ezahlukahlukene zihlaziya nokuhlola, ukuklama ubunjiniyela bezitshalo, izincomo ezikhetha izincomo, izeluleko zokugcina ukuphathwa kwezitshalo, insizakalo yemishini isikhathi ngemuva kokuthengisa, izingxenye ezisele nezesekeli ze Equipments ukunikela. Isitolo esikhulu seBricmaker sikunikeza ngesevisi yokuthenga okukodwa bese uqedela isisombululo sephrojekthi yekhiye yokujika ekhaya nasemazweni aphesheya.
Ukuze wehlise kakhulu izindleko ezenziwe ngezandla zokwakha izitini, i-automation iyindlela engenakugwenywa yentuthuko yezitshalo zezitini. I-Clay brick / block plant automation ifaka okulandelayo: izinto ezihlukile zokusetshenziswa ezifanayo, isilinganiso sokunisela; izinto zokondla nokulawula ezishintshayo; isitini oluhlaza / ibhulokhi lokusika-ukuqoqa-ukuhambisa-ukustaka; umhubhe kuhhavini, kuhhavini wokuhambisa ophakathi nendawo uhlelo oludidiyelwe lokulawula; kuqedile uhlelo lokupakisha izitini / amabhlogo.
Awukwazi ukushintsha umncintiswano oshisayo wemakethe, esingakwenza nje ukuzama ukuthola izindleko eziphansi zokukhiqiza. Singakunika imishini esezingeni eliphakeme kanye nesitini sokuklama okuthuthukile, qhathanisa nokunye okunikezwayo okufanayo noma okufanayo, imikhiqizo yethu nokuklama ngokusindisa ugesi okungama-30 ~ 40%, nokusebenza kahle okuphezulu okungu-130% +.